နိုင်ငံအေးချမ်းရေးနှင့် အပစ်ရပ်ရေးအတွက် ပင်လုံစိတ်ဓာတ် မွေးမြူကြရန် ဒေါ်စု တိုက်တွန်း
ဓာတ်ပုံ – စိုးသန်းလင်း နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၇ ယနေ့ ညနေ ၅ နာရီတွင် နေပြည်တော် စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာရှိ အင်န်အယ်လ်ဒီအမတ်များ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ အမျိုးသားနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တို့မှ တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်အမတ်တို့နှင့် ၂၅ မိနစ်ခန့်တွေ့ဆုံစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယင်းသို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ “ဗမာလည်း တိုင်းရင်းသားပဲ၊ ဗမာအပါအဝင်.
ရေဘေးသင့်ဒေသ ရန်ပုံငွေအတွက် နိုင်ငံတကာ အကြမ်းပတမ်း နပန်းပွဲ ကျင်းပမည်
ထိုးသတ်ကြမည့် ဂျပန်နှင့် အမေရိကန်နပန်းသမားအတွဲ တစ်တွဲကို ပြသနေစဉ်။ ဓာတ်ပုံ – ကျော်ဖုန်းကျော် ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၇ ကမ္ဘာတွင် ခေတ်စားသည့် ဒဗလျူဒဗလျူအီးကဲ့သို့သော အကြမ်းပတမ်း တိုက်ခိုက်သည့် နပန်းသတ်ပွဲတစ်ခုကို လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီတွင် ကျင်းပမည်ဟု ပွဲစီစဉ်သူများက ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက် တနင်္လာနေ့က.
ဒေါ်စုနှင့် သမ္မတ ငြိမ်းချမ်းစွာ အာဏာလွှဲပြောင်းရေးကိစ္စ အဓိက ဆွေးနွေး
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့သည် ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် သမ္မတအိမ်တော်၌ ၄၅ မိနစ်ကြာ တွေ့ဆုံခဲ့ကြရာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အာဏာလွှဲပြောင်းရေးကိစ္စကို အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု ဆွေးနွေးပွဲအပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။ အေးချမ်းစွာ.
Breaking News, အထူးကဏ္ဍ, စီးပွားရေး
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း လာမည့်ရက်သတ္တပတ် ဖွင့်မည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး အရင်းအနှီးဈေးကွက်ဖြစ်သော ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းကို လာမည့် ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) တွင် ဖွင့်လှစ်မည် ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး အရင်းအနှီးဈေးကွက်ဖြစ်သော ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းကို လာမည့် ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) တွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဟု စတော့အိတ်ချိန်းကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ.
မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အသက်မပြည့်သေးသော စစ်သား ၅၃ ယောက်ကို တပ်မတော်မှ ယနေ့နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ရာ ယခုနှစ်အတွင်း စစ်တပ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခဲ့သူ ၁၄၆ ဦး ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၃၀ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အသက်မပြည့်သေးသော စစ်သား ၅၃ ယောက်ကို တပ်မတော်မှ ယနေ့နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ရာ ယခုနှစ်အတွင်း.
စတုတ္တမဏ္ဍိုင်၏ ကျော်လွှားရမည့် အခက်အခဲများ
သတင်းနှင့် ဂျာနယ်လစ်ပညာ အဆင့်အတန်း
ပိုင်ဆိုင်ကြွယ်ဝမှု စစ်တမ်းကောက်ရန် နည်းဥပဒေ လွှတ်တော်ခွင့်ပြုချက်ကို စောင့်နေရ ဟုဆို
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး အပြောင်းအလဲကာလမှာ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှု၊ သန့်ရှင်းသော အစိုးရတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းရေးတွင် အရေးပါလှသည့် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ အသက်ဝင်လာစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေကို အတည်ပြုပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိရာ ထိုနည်းပဒေ ပေါ်ပေါက်မှသာ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာရှိသူတို့၏ ကြွယ်ဝမှုစစ်တမ်းကို ကောက်ယူနိုင်မည်ဟု.
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ, အတွေးအမြင်/သုံးသပ်ချက်
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ဘာတွေ ထူးခြားသလဲ
၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို အောင်အောင်မြင်မြင် ကျင်းပပြီးသွားပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်အရှုံးရလဒ်တွေလည်း ထွက်ပေါ်လာနေပါပြီ။ စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ အခုဆိုရင် ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်မှာ ကျင်းပတဲ့ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို အောင်အောင်မြင်မြင် ကျင်းပပြီးသွားပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်အရှုံးရလဒ်တွေလည်း ထွက်ပေါ်လာနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း အတည်ပြုစာရင်းတစ်ခု ရဖို့အတွက်ကိုတော့.